hamropusta.comLatest News कोरोनाको तेस्रो लहर- खोप नपाउँदा जोखिममा बालबालिका – hamropusta.com
कोरोनाको तेस्रो लहर- खोप नपाउँदा जोखिममा बालबालिका
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर चल्ने अनुमान विज्ञहरूले गरिरहँदा त्यसमा बालबालिका बढी प्रभावित बन्ने प्रक्षेपण पनि गर्न थालिएको छ। कतिपय विज्ञ यसमा सहमत देखिँदैनन् तर १२ वर्षमुनिको उमेर समूहसम्म खोप नपुगेका कारण यो अनुमानलाई अस्वीकृत गर्न नसकिने भनाइ पनि विज्ञहरूको छ।
पहिलो लहरमा संसारभर ज्येष्ठ नागरिकमा बढी कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। विभिन्न भेरियन्टसहितको दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमण ज्येष्ठ नागरिकमा सीमित रहेन, बयस्क, युवा-युवतीदेखि बालबालिकासमेत प्रभावित बने। ज्येष्ठ नागरिक, बयस्क र युवावयको जनसंख्यामा कोरोनाविरुद्ध खोपसहित रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास बढ्दो क्रममा रहेकाले तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित बन्न सक्ने आकलन गरिएको हो।
शुक्रबारसम्म देशभरका कोरोना संक्रमितको संख्या ६ लाख ५२ हजार आठ सय ५९ पुगेको छ। तीमध्ये नौ हजार तीन सय ४० जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म ६ लाख १६ हजार नौ सय २९ जना निको भएका छन्। त्यसको अर्थ हो २६ हजार पाँच सय ९० जनामा सक्रिय संक्रमण छ। यही संख्यामा आउँछन्, संक्रमणमा परेका बालबालिका पनि। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरमणि अधिकारीका अनुसार हालसम्म १२ वर्षमुनिका २० हजार तीन सय ८५ बालबालिकामा कोभिड-१९ पजिटिभ देखिएको छ। तीमध्ये ४३ जनाको मृत्यु भएको छ।
सर्सर्ती हेर्दा सानो संख्या लागे पनि कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट बालबाबालिकासमेत अछुतो नरहेको यो तथ्यांकले देखाउँछ। बयस्क र ज्येष्ठ नागरिकले खोप पाइरहँदा बालबालिकाले पाउने किन नपाउने भन्ने निश्चित छैन। तसर्थ, तेस्रो लहरमा उनीहरूमा बढी प्रभाव पर्न आकलन गर्ने गरिएको छ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भने तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई मात्र कोरोनाले बढी असर पार्छ भन्ने विश्लेषण गैरजिम्मेवार रहेको बताउँछन्। कोरोना वा जुनसुकै भाइरसले सबै उमेर समूहलाई उत्तिकै असर पर्ने उनको भनाइ छ।
‘कोरोनाको तेस्रो लहरमा बालबालिका मात्र बढी प्रभावित हुन्छन् भन्ने एकदमै गैरजिम्मेवार कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि रोग वा भाइरसले निश्चित उमेर समूहलाई मात्र असर गर्छु भनेर लक्षित हुँदैन। यस्तो विश्लेषणले सम्बन्धित उमेर समूहमा तनाव मात्र सृजना हुन्छ।’ कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना भने उनी नकार्दैनन्। र, बालबालिका मात्र नभई सबै उमेर समूहका मानिसलाई सतर्कता अपनाउन सुझाउँछन्।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन पनि तेस्रो लहरमा बालबालिका मात्र बढी प्रभावित हुने कुरा सही नभएको बताउँछन्। अहिले कोरोनाविरुद्धको खोप बालबालिकालाई नदिइएको हुनाले पनि यस्तो विश्लेषण गरिएको हुन सक्ने पुनको टिप्पणी छ।
‘खोप नलगाएकाहरू जोकोही पनि कोरोनाको जोखिममा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बालबालिकालाई खोप दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले पनि बालबालिका बढी जोखिम रहेको आकलन गरिएको हो।’
डा. पुनका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहर केही हदसम्म नियन्त्रणमा आएको देखिएको छ। अब तेस्रो लहर चलुन्जेलसम्म अन्य उमेर समूहका मानिसले खोप पाउने तर बालबालिकाले नपाउने हो भने उनीहरूलाई बढी जोखिम हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। ‘हरेक भाइरसले सबैलाई उत्तिकै प्रभाव पार्छ। बच्चालाई मात्र समस्या ल्याउँछु भनेर आउँदैन,’ उनी भन्छन्।
बाल रोग विशेषज्ञ डा. कैलाश शाहको तर्क भने फरक छ। बयस्क र ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना संक्रमण भएर एकप्रकारले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भइसकेको भएर पनि कोरोनाको तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ देखिन्छ।
‘पहिलो लहरमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाले बढी असर गरेको थियो। दोस्रो लहरमा २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई पनि असर गर्‍यो। उनीहरूमा एक प्रकारको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि भइसकेको छ,’ डा. शाह भन्छन्, ‘तीमध्ये कतिले खोप पनि लगाइसकेका छन्। त्यही कारण पनि बालबालिका बढी जोखिममा छन्।’
उनका अनुसार जुलाई र अगस्टमा यसै पनि विभिन्न भाइरसले शरीरमा आक्रमण गर्छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरले बालबालिकामा बढी असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने यकिन भने नभएको डा. शाहको भनाइ छ।
अहिलेदेखि नै बालबालिकालाई परिवारले बढी सजगताका साथ हेरचाह गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ। बालबालिकालाई धेरै मानिसको सम्पर्कबाट टाढा राख्ने, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न सिकाउनेलगायत क्रियाकलाप गर्न जरुरी रहेको डा. शाह बताउँछन्।
केहीगरी अहिलेको अनुमान सही भयो भने देशभरका अस्पतालमा कम्तिमा २० प्रतिशत शय्या बालबालिकाका लागि छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। तेस्रो लहर आएमा बालबालिकालाई बढी असर हुन नदिन विभिन्न नीति तयार गर्नुका साथै अध्ययन गरी उनीहरूलाई खोप दिन बाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको डा. शाह बताउँछन्।